कोइराला, सिंह र निधिको सहकार्यले कांग्रेसले कस्तो मोड लेला ?
सोमबार, कात्तिक १०, २०७७ ०४:३०:४३ युनिकोड पुरानो वेबसाइट
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसभित्र ७० कटेका दुई नेता सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल फेरि पनि पार्टी नेतृत्वका मुख्य दाबेदार हुन् ।
देउवा र पौडेलले यसपटकको महाधिवेशनलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनको सम्भवत अन्तिम प्रतिष्पर्धाका रुपमा लिएका छन् । काँग्रेस सभापति भएर भावी प्रधानमन्त्रीको मार्ग सुनिश्चित गर्ने दाउमा दुवै नेता छन् ।
देउवा पहिलोपटक काँग्रेस पार्टी सभापति बनेका हुन् । उनी चार पटक प्रधानमन्त्री बनिसके । वरिष्ठ नेता पौडेल अहिलेसम्म काँग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै बन्न सकेका छैनन् । तर, उनी सभामुख, उपप्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेता हुन् ।
देउवा र पौडेलको सभापतिमा दाबी देखिएपनि उनीहरुपछिको पुस्ताले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि आग्रह गर्न थालिसकेका छन् । दुवै पक्षका नेताहरुले सर्वाेच्च नेता बनेर नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव गर्न थालेका छन् । यसरी देउवा र पौडेलभन्दा फरक नेता सभापति बनाउन ठुलो समुह काँग्रेसभित्र सक्रिय भइसकेको छ ।
काँग्रेसमा फेरि विरासतको राजनीति गर्दै आएका नेताहरु नेतृत्वमा पुग्न सक्रिय भएका छन् । काँग्रेसका संस्थापक नेताहरु वीपी कोइरालाका पुत्र सशांक कोइराला, गणेशमान सिंहका पुत्र प्रकाशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिका पुत्र विमलेन्द्र निधि मुख्य प्रतिष्पर्धीका रुपमा देखिनथालेका छन् । कोइराला परिवारका डा. शशांक कोइराला पनि सभापतिका दाबेदार हुन् । यसरी तीनवटा परिवारका सदस्य सभापतिको दाबी गर्दै बढिरहँदा उनीहरुको मिलनको विषय पनि जोडदार रुपमा उठिरहेको छ । तीन परिवार मिलेमा देउवा र पौडेलमाथि दबाब सृजना हुने कतिपय काँग्रेस नेता कार्यकर्ताको बुझाई छ ।
वास्तवमा देउवाको आधा शक्ति विमलेन्द्र निधि हुन् । पौडेलको लगभग ९० प्रतिशत शक्ति डा. सशांक कोइराला, डा. शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंह नै हुन् । उनीहरुले साथ छाडेर तीन परिवारको एकता बनाएर बढेमा देउवा र पौडेलले सभापतिको चुनाव लड्न ठुलै हिम्मत निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ । उनीहरुको बेमेलले मात्र देउवा र पौडेलको प्रतिष्पर्धाको माहोल बन्न सक्छ ।
काँग्रेसभित्र कोइराला, सिंह र निधिबीचको सम्भावित एकतालाई लिएर बहस हुन थालेको छ । तीनजना नेताको औपचारिक अनौपचारिक भेटघाट हुन थालेको छ । एक अर्कामा राजनीतिक लेनदेन गरी एकै ठाउँमा आउनेबारे उनीहरुबीच छलफल समेत चलेको छ । यो सम्भव भएमा देउवा र पौडेल सर्वोच्च नेता बन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । या त भविष्यमा राष्ट्रपतिको दाबेदार बनेर दोस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई सहयोग गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् ।
कोइराला, सिंह र निधिबीच राजनीतिक लेनदेनबाट सहमति बन्ने सम्भावना सजिलो भने छैन । तीनैजना उस्तै उमेरका हुन् । आफ्नै दाबी प्रस्तुत गरेर महाधिवेशनको तयारीमा छन् । यी तीनबीच पार्टी र सरकार सञ्चालनमा फरक फरक व्यक्तिले गर्ने सहमति बन्ने सम्भावना भने छँदैछ । तर, कस्ले त्याग्ने भन्ने विषय आउन सक्छ । प्रकाशमान सिंह आफ्ना पिता गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पद नै त्यागेको बताउँदै सधै आफूहरुले मात्र त्याग्नुपर्ने ? भन्न थालेका छन् । शशांक कोइराला बाबु वीपीको लाइनमा काँग्रेसलाई चलायमान बनाउने एजेन्डाका साथ सक्रिय छन् । निधि मधेशी समुदायबाट पहिलोपटक देशको प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् । यसरी तीनैजनाको आफ्नै चाहना र महत्वाकांक्षा छ । तर, तीनैजनाले पार्टीलाई बलियो बनाउन नेतृत्व परिवर्तन अनिवार्य छ भन्नेमा सहमति जनाएका छन् । यही सहमतिमा उनीहरुबीच मिलनबिन्दु तयार गर्ने सम्भावना बलियो छ । तर, त्यो सजिलो भने छैन ।
यता, देउवाले आफू सभापतिमा उठ्ने वातावरण नबने निधिलाई नै साथ र महामन्त्रीमा आफ्नी पत्नी डा. आरजु राणालाई अघि सार्ने योजना बनाएका छन् । आरजुको पार्टीभित्र राम्रो प्रभाव छ । उनी कैलालीबाट प्रतिनिधिसभाको लागि चुनावसमेत उठेकी थिईन् । देउवाले पत्नी आरजुलाई पार्टीभित्र शक्तिशाली बनाउनेगरि कुटिल चाल चालेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबाट भने यसपटक नेतृत्वमा धेरैको आकांक्षी छन् । पौडेल स्वयम् सभापतिमा उठ्ने तयारीमा छन् भने सिंह र शशांकले पनि आफूलाई सभापतिमा उठाउनेगरि तयारी र भेटवार्तालाई तिव्रता दिएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसमा घट्दै गएको जनविश्वास र विरासतको राजनीति फेरि फर्काउन एउटा समुह सक्रिय भएको छ । कोइराला, सिंह र निधि परिवारलाई एकजुट बनाएर पार्टी नेतृत्वमा नयाँ अनुहार ल्याउनुपर्ने केही कांग्रेसका नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।
कोइराला परिवारका डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला र डा. सशांक कोइराला, सिंह परिवारका प्रकाशमान सिंह र निधि परिवारका विमलेन्द्र निधिलाई एकजुट बनाउन सके नेतृत्वमा यिनैमध्येबाट एक पुग्ने काँग्रेसभित्र एक समुहको निष्कर्ष रहेको छ । वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, महेन्द्र नारायण निधि र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरासतका रुपमा उनीहरुका सन्तानलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न सके काँग्रेसभित्र नयाँ जीवन सञ्चार हुनसक्ने एउटा पक्षको ठम्याई छ ।
७० वर्षको आसपास पुगेका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री सशांक कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह सभापतिका सशक्त दाबेदार हुन् । डा. शेखर कोइराला र सुजाता कोइराला पनि दाबेदार हुन् । काँग्रेस महामन्त्री भइसकेका महेन्द्रनारायण निधिका छोरा विमलेन्द्र निधिले यसपटक सभापतिमा दाबी गरिएन भने अब हुन नसक्ने देखिसकेका छन् । त्यसैले उनले सभापति देउवालाई भेटी आफूलाई सघाउन भनेका छन् । तर, देउवाले एक कार्यकाल कुर्न भनेपछि उनी बिच्किएका छन् ।
६४ वर्षको उमेरमा नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । संसारमा पछिल्लो समय युवा पुस्ताका नेताहरु देशको नेतृत्वमा पुगिरहेका छन् । पुटिन ६० नकट्दै रुसका राष्ट्रपति बनेका थिए । डोनाल्ड ट्रम्प ७० कटेपछि राष्ट्रपति बन्दा समेत अलि उमेर बढी भएका परे भनेर असन्तुष्टि थियो । यस्तो विश्व परिवेशमा विरासतको राजनीतिबाट आएका नेताहरु ७० पुग्न लाग्दा समेत नेतृत्वमा पुग्न नसक्नुले गम्भीर हुन थालेका छन् । त्यसैले उनीहरुले यो पटक काँग्रेसको महाधिवेशनलाई गर या मरका रुपमा लिन थालेका छन् ।
सशांक कोइरालाले गएको महाधिवेशनमै सभापतिको दाबी गरेका थिए । तर, पछि उनी महामन्त्री लड्न तयार भए र जिते । प्रकाशमान सिंह पनि गएको महाधिवेशनमा पछि हटे । अब उनी हट्ने पक्षमा छैनन् । देउवालाई आफूले मात्र हराउन सक्ने भन्न थालेका छन् । निधिले अघिल्लो पटक देउवालाई साथ दिएर आफ्नो मार्ग प्रशस्त गरे । यसपटक उनी आफै सभापतिको दाबी गर्दै मैदानमा उत्रिने गरी सक्रिय भइसकेका छन् । यतिसम्मकी डा.सशांक कोइरालालाई भेटेर राजनीतिक लेनदेनको प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।
लगभग एउटै उमेरका प्रकाशमान सिंह, सशांक कोइराला र विमलेन्द्र निधि मिलेर बढ्ने सम्भावना नभएको होइन तर सजिलो भने छैन । तीनैजना आफूलाई काँग्रेस नेतृत्व गर्न सक्षम र हकदार सम्झन्छन् । सशांक आफ्ना पिता वीपी कोइरालाको विचार आफूले बोकेर काँग्रेसलाई नवजीवन दिनसक्ने ठान्छन् । उनले देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कतिपय विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने बोल्दै आएका छन् । उनीसँग केही निश्चित राजनीतिक एजेन्डा पनि छ । तर, सशांक राजनीतिमा धेरै पछि आएको र धेरै योगदान नगरेको भन्दै उनलाई नेतृत्वमा पु¥याउन नहुने तर्क एकाथरीको छ ।
प्रकाशमान सिंह आफूलाई काँग्रेस नेतृत्वको हकदार ठान्छन् । आफ्ना पिता गणेशमान सिंहले किस्तीमा प्रधानमन्त्री पद आउँदा समेत त्यागेको र आफूले पनि तल्लो तहदेखि राजनीति गरेर अहिलेको स्थान बनाएकोले अब आफू अगाडि बढ्ने निकटस्थसँग बताएका छन् । इमान जवानको राजनीतिक गर्ने संस्कार स्थापित गर्ने, काँग्रेसको पुरानो साख फर्काउन भुमिका खेल्ने जस्ता उनका एजेन्डा छन् ।
निधि नेपालको राजनीतिमा मधेशबाट पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना भएका नेता हुन् । उनले यसपटक यसकारण पनि साहस बढाएका छन् । उनी आफ्ना पिता महेन्द्रनारायण निधिले काँग्रेसमा पु¥याएको योगदान र देखाएको त्यागसँगै विद्यार्थी राजनीति देखि आफूले गरेको संघर्षका कारण परिपक्व भइसकेको ठान्छन् । त्यसैले सभापतिमा उनको दाबी देखिएको छ ।
यसरी तीन शक्तिशालीलाई मिलाउनका लागि केही न केही राजनीतिक लेनदेन अनिवार्य छ । कसै न कसैले त्याग गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
भविष्यमा पार्टी र सरकार हाँक्ने विषयमा लेनदेनको सहमति बनाएर जाने सम्भावना नभएको होइन । तर, यसरी सहमति बनाउन खोज्दा देउवा र पौडेलमध्ये एकले उनीहरुलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ । यी दुईमध्ये एक वा दुवैले त्याग गरेमा नयाँ पुस्तामा नेतृत्व आउन सक्छ । देउवाले तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरणमा सहमति जनाउने सम्भावना कम छ । तर, पौडेललाई देशको सर्वोच्च पदमा लाने गरी कोइराला, सिंह र निधिबीच सहमति निकाल्नेबारे काँग्रेसभित्र आन्तरिक तयारी भएको बुझिएको छ । यो खिचडी पाकिरहेको छ तर पुरा पाक्ने नपाक्ने निश्चित भने छैन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २३, २०७७, १०:१२:००